May 30, 2012 - Written by Baydhabo:-Wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay ayaa sheegaya in koox hubeysan oo dhagarqabayaal ah ay dhaawaceen Cali Shaambo oo ka mid ahaa Ciyaartooydiii hore ee xulkii kubbadda cagta Soomaaliya xili uu ka soo baxay masaajid ku yaal magaalada Baydhabo.
Cali Shaambo ayaa in mudo ah ku noolaa magaalada Baydhabo waxaana caawa weeraray labo dhalinyaro ah oo ku hubeysan Bistoolado xili uu ku sii jeeday gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Isha Baydhabo.
Taliyaha saldhigga booliiska Baydhabo Aadan Axmed Cumar (Biid) oo caawa saxaafada la hadlay ayaa sheegay in Cali Shaambo ay dhaawaceen koox aan la aqoon cida ay yihiin balse ay wili wadaan baaritaano ku aadan weerarka lagu qaaday Cali Shaambo.
Mid ka mid ah Dhaqaatiirta ka howl gala Isbitaalka magaalada Baydhabo ayaa saxaafada u sheegay in Cali Shaambo uu dhaawaciisa uu culus yahay ayna la tacaalayaan isaga oo ka dayriyey in wax looga qaban karo Isbitaalka magaalada Baydhabo.
Ilaa haatan lama yaqaan cid weerarka ku qaaday Cali Shaambo iyo ujeedada ay ka leeyihiin mana jirto cid sheegatay.